TC spandex တစ်ခုတည်းဂျာစီထည်,polyester spandex interlock ပိတ်ထည်
100% polyester ပတ်ချာလည်ကြိုး
အားလုံး 100% polyester ပတ်ချာလည်ကြိုး
နံရိုးထည်ကဘာလဲ? နံရိုးထည်အလှည့်အတွက်အပြုသဘောနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ထိုးပြီးထည်၏ဒေါင်လိုက်လိုင်းကွိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ကြိုးဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ နံရိုးထည်၏အားသာချက်များ။ နံရိုး ထည် decoherence, crimping နှင့် extension ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်, ထို့အပြင်ကြီးမြတ် flexibility.it ရှိပါတယ်အသုံးပြုသည် ရှပ်အင်္ကျီက...
သင်ဤအမျိုးအစား, ရုပ်ပုံကိုအောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်အဖြစ် သိုးမွေးထည် color.you သင်ကထုတ်လုပ်ခဲ့ပုံကိုသိ it.do ထံမှ 3color န်းကျင်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်စင်ကြယ်သည်မဟုတ်လော ဒီအမျိုးအစား သိုးမွေးထည် မဲလင့်လောင်စာများကြိုး အသုံးပြု. ယက်ခဲ့, အပြောင်းအလဲနဲ့ sueding, ဆံပင်ဖမ်းပြီးနောက်ချောထည်သိုးမွှေးမျက်နှာပြ...
အလယ်ပိုင်းဆောင်းဦးရာသီပွဲတော်အဘို့ဆောင်သောပွဲနှင့်နှစ်ပတ်လည် mooncake လောင်းကစားဝိုင်း - 30 Sep 2017
အလယ်ပိုင်းဆောင်းဦးရာသီပွဲတော်အဘို့ဆောင်သောပွဲနှင့်နှစ်ပတ်လည် mooncake လောင်းကစားဝိုင်း အလယ်ပိုင်းဆောင်းဦးရာသီပွဲတော်တစ်ခုရိုးရာတရုတ်ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအထူးနေ့ရက်ပြန်လည်ဆုံဆည်း day.in ဖြစ်ပါသည်, တောင်ဝေးအိမ်ကမှလူလည်းလမုန့်ကိုစား, လကိုခံစားဖို့အတူတူအိမ်ပြန်နှင့်မိသားစုရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေပါလိမ့်မယ်, ဒီကယ့်...
2017 ဘင်္ဂလားဒေ့ (Dhaka) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထည်ပြပွဲ - သြဂုတ်လ 11 မှသြဂုတ်လ 9
ရက်စွဲ: သြဂုတ်လ 9-12th, 2017 အချိန်မဖွင့်: ~ 19:30 10:30 တဲ: ဘင်္ဂလားဒေ့ - တရုတ်ချစ်ကြည်ရေးပြပွဲစင်တာ 2017 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအထည်ပြပွဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျင်းပခဲ့သည် - တရုတ်ချစ်ကြည်ရေးညီလာခံနှင့်ပြပွဲ center.the ပြပွဲ9ကနေ 12 သြဂုတ်လမှပြီးခဲ့သည့်သုံးရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထည်အရောင်းဆိုင်၏ကျယ်ပြန့်အရေအတွက်ကဒီပြပွဲ...
2017 29 ဗီယက်နမ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအထည်အလိပ်အထည်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပြပွဲ - april 8 မှ april 5th
april 5th ကနေဧပြီလ 8, 2017 ငှါ, 29 ဗီယက်နမ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအထည်အလိပ်အထည်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပြပွဲ Ho Chi Minh city.the ပြပွဲအတွက် secc ဆိုင်ဂုံကနိုင်ငံတကာပြပွဲစင်တာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးသုံးရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထည်အရောင်းဆိုင်များနှင့်အဝတ်အစားထုတ်လုပ်သူများကျယ်ပြန့်အရေအတွက်ကဒီပြပွဲမှဆွဲဆောင်ခဲ့သ...
11 ချီတက်ဖို့ချီတက် 9th - 8 သီရိလင်္ကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပိတ်ထည်နှင့်ချည်တရားမျှတတဲ့ cifs2017
သီရိလင်္ကာထည်နှင့်ချည်ရဲ့ 8th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြပွဲ cifs2017 grandly carcolombo စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုနှင့်ပြပွဲစင်တာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ပြပွဲကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအဓိကအားဖြင့်နှစ်ဦးကိုစီးရီးထုတ်ကုန်အမည်ရအားကစား series နှင့်ပေါ့ပေါ့ wear စီးရီးပြသ။ ပြပွဲအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအရောင်းက...
မူပိုင်ခွင့် © 2019 Yorgreat International Holding Limited..မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး. မှပံ့ပိုးသည် dyyseo.com.